आफ्नै कमाइले अर्बपति बनेका ९ वर्षका बालक, यस वर्ष मात्र कमाए २७ अर्ब ! – PathivaraOnline
Home > रोचक > आफ्नै कमाइले अर्बपति बनेका ९ वर्षका बालक, यस वर्ष मात्र कमाए २७ अर्ब !
admin December 26, 2020 रोचक	0
खेल्ने पढ्ने उमेरका ४ वर्षीय वाञ्चिन तामाङ मृत्युु कुर्दै, सके सहयोग वा शेयर गर्नुहोला!
के राति तपाइहरूले यस्तो सपना देख्नु भयो? धनवान बनाउने केहि सपनाहरू यस्ता छन् तपाईंको सपनासँग मिल्यो कि ?